Abenzi base China ukrole ipeni kunye nabathengisi | Uhlobo
ukupakishwa okwenziwe ngomlomo
Igama lemveliso Kroba iPen
Inombolo yomzekelo: HS002
Izixhobo I-HIPS + Ingcebiso ye-Emery
Ubungakanani bento (cm): 17.5x3x3
Into yobunzima (g): 60.5g
Ubungakanani bePakethe (cm): 21x11x3
Ukupakishwa kwemveliso: Ikhadi leBlister
Ubunzima bobunzima (kg): 13kg
Ubungakanani beCarton (cm): 44.5x40.5x43
Umkroli kunye nokukrola ipeni kunye nesixhobo se DIY
Zenzele iimfuno zakho: usiba lokubaza lungasetyenziselwa ukushiya uyilo lwakho kwinto oyithandayo okanye ebiza kakhulu.
Inokuba yipateni, isicatshulwa, isimboli, nasiphi na isiphumo osifunayo. Unokunika izipho zoyilo kubantu obathandayo, kubahlobo,
abathengi okanye izihlobo. Oku kuyakwenza ukuba ubonakale unyanisekile kwaye ungoyena mntu ubuqu, ngaloo ndlela uqinisa ubudlelwane bakho.
Xa ugqiba isiqwenga somsebenzi wakho wezandla, kuyinto eyonwabileyo, le peni yokukrola inokukunceda ukuba uyigqibe.
Umakhi wesandla omkhulu: Imizobo eqingqiweyo yayo nayiphi na into: iinkuni, isinyithi, iglasi, isikhumba kunye nokunye.
Incinci kwaye ibhetyebhetye inokwenza kube lula, kumnandi kwaye kukhuseleke ukuyenza ngesandla.
Le pen yokubumba inokubonisa ngokugqibeleleyo izimvo zakho kunye noyilo, kwaye iluncedo olukhulu kuwe ukuba wenze ngesandla
Iibhola ezininzi ezikroliweyo zinokuhlangabezana neemfuno zeengcamango ezahlukeneyo zokukrola, zenze kube lula, zityebe kwaye zikhuseleke ukwenza ngesandla.
Uyakuthanda nemvakalelo yokusebenzisa iipeni ezikroliweyo.
Khusela ipropathi yakho ebizayo ngokubhala iinkcukacha zakho kuyo, ukuvumela ukuthotyelwa komthetho ukuba kubuye kufumaneke kwaye kuchongwe ukukrolwa kwepropathi ebiweyo kuphela kwendlela yokuzama nethembekileyo ngexesha lobusela.
Egqithileyo Ukuthwala ngokulula
Okulandelayo: Ngaphezulu komnyango wendawo yokuhlala
Ipleyiti yePlastiki enokuphinda isebenze, Sela imoto yokubamba, Izibuko zelanga zangokwezifiso, INdebe yeNdebe yeMoto eyandisayo, Izixhobo zokuCoca imoto, Amacwecwe ePlastiki alukhuni,